Muxuu ka yiri Jose Mourinho kaddib markii uu Iker Casillas kubadda cagta ka fariistay? – Gool FM
Dajiye August 4, 2020
(London) 04 Agoosto 2020. Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa carabka ku adkeeyay inuu sii wadi doono xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Iker Casillas, kaddib saacado markii uu goolhaayaha reer Spain ku dhawaaqay inuu ka fariistay gabi ahaanba ciyaaraha.
Waxaa la fahansan yahay in Jose Mourinho iyo Iker Casillas ay si weyn isugu dheceen inta ay ku sugnaayeen kooxda Real Madrid, gaar ahaan muddadii u dhaxeysay 2010 illaa 2013, taasoo sababtay in Macalinka reer Portugal uu kursiga keydka dhigo goolhayaha reer Spain, wuxuuna badelkiisa adeegsan jiray Diego Lopez.
Iker Casillas oo xirfadiisa kubadda cagta ku soo gabagabeeyay kooxda reer Portugal ee FC Porto ayaa shaaca ka qaaday inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta.
Haddaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Jose Mourinho, wuxuuna yiri:
“Maskaxdiisa iyo qaangaarnimadiisa markii aan ku sugneyn kooxda Real Madrid, waxay naga dhigtay in midkeen kan kale uu ixtiraamo, sanado kaddib, waxaan awoodnay inaan weyneeno saaxiibtinimada naga dhexeysa”.
“Wuxuu goolhaye taariikhi ah u yahay kooxda Real Madrid, Spain iyo kubadda cagta adduunka”.
“Waxaan kula guuleystay horyaalka Spain, wuxuuna la kulmay waqtiyo adag, balse inaan ku badelo goolhaaye kale booskiisa ma aheyn go’aan shaqsiyadeed”.
Si kastaba ha noqotee, Iker Casillas ayaa kula guuleystay kooxda Real Madrid tartanka UEFA Champions League sanadkii 2014, wuxuuna sanad kaddib ku dhawaaqay inuu aaday Porto, wuxuuna halkaas ka sameeyay heerar wanaagsan, ka hor inta uusan xagaagan ku dhawaaqin inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaaraha.